आयुर्वेद औषधीले ८५ प्रतिशत कोरोना संक्रमित ७ दिनमै निको भएका छन् – Health Post Nepal
२०७७ भदौ २९ गते १०:१९
कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि आयुर्वेद औषधी प्रभावकारी देखिएको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।
नेपालमा आयुर्वेद औषधीकै प्रयोगले संक्रमित चाडैं निको हुन थालेका छन्।
कोरोना उपचारमा आयुर्वेद औषधीको प्रभाव कस्तो छ, कसरी उपचार भइरहेको छ?
राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामआधार यादवसँग हेल्थपोस्टका पुष्पराज चौलागाईंले कुराकानी गरेका छन्–
कोरोना संक्रमणमा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रले कसरी काम गरिरहेको छ?
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई कोभिड अस्पताल रूपमा घोषणा गरेपछि हामीले २ सय बेड बनायौँ।
सरकारको मापदण्ड अनुसार हाल २ सय भन्दा माथि कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका छौँ। सबै संक्रमितलाई आयुर्वेदको साथ–साथै एलोपेथिक औषधी पनि प्रयोग गर्दै आएका छौं।
यहाँ धेरै संक्रमित मध्यम लक्षण भएका छन्। जस्तैः मध्यम ज्वरो, रुवाखोकी, गन्ध थाहा नपाउनेजस्ता लक्षणहरू देखा परेका छन्।
अहिले जनमासमा कोभिड भएपछि संक्रमितमा ‘मर्छु कि?’ भन्ने डर रहेको पाइएको छ। उपचार भइरहेका केही संक्रमित आत्तिरहेका देखिन्छन्। तर, हामीले काउन्सिलिङ गर्दै आएका छौं।
धेरै ज्वरो, खोकी लागेको संक्रमितलाई आयुर्वेदका का साथ–साथै एन्टिबायोटिक औषधी पनि चलाउने गरेका छौँ। तर, ९९ प्रतिशत केसमा आयुर्वेदबाट उपचार भइरहेको छ। बिरामीको निको हुने दर बढिरहेको छ। धेरै कम प्रतिशतलाई हामीले अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ।
रिफर गर्नुपर्ने केसमा अधिंकास मिर्गौला, मुटु, रक्तचाप वा दीर्घरोगी छन्।
जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ?
केन्द्रमा जति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी थिए, सबै खटिएका छन्। त्यसका साथ–साथै केही स्टाफ नर्सहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य अस्पताल खटाएको छ। अहिले हामीकहाँ २ टिमले काम गरिरहेको छ।
२ जना डाक्टर, ८ जना नर्स गरी १६ स्वास्थ्यकर्मी एक सिफ्टमा राखेका छौं। उहाँहरू १४ दिन सम्म काम गर्नुहुन्छ र ७ दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा जानुहुन्छ। त्यसपछि अर्को टिम आएर काम गर्छ।
कस्ता संक्रमितलाई कस्तो आयुर्वेद औषधी चलाइएको छ?
धेरै ज्वरो देखिएको संक्रमितलाई एन्टिबोयोटिक पनि दिने गरेका छौं।
कहिलेकाहीँ तनावको कारणले पनि इम्यूनिटी पावर कम भएको हुन्छ। हामी यहाँ संक्रमितलाई योगा, प्राणायाम गराउने, म्यूजिक थेरापी दिँदै आएकाले पनि संक्रमित चाँडै निको भएका छन्। शरीरमा इम्यूनिटी बढाउनको लागि दिनचर्या, जीवनशैलीको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।
लक्षणको आधारमा आयुर्वेद औषधी दिने गरेका छौ। रुघाखोकी छ भने सिटोप्लादि चूर्ण, घाँटी खसखसमा लागि कस्तूर्यादि वटी, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएमा श्वासखुठा रस दिने गरेका छौँ।
त्यसैगरी गुर्जो, जेठीमधु, त्रिकुट आदि दैनिक ३ पटक सबैलाई दिने गरेका छौं। बिरामीले पनि आयुर्वेद औषधीलाई मन पराईरहेका छन्। आयुर्वेदमा पहिलादेखि प्रयोग गरेको औषधीलाई छलफल गरेर ट्याबलेट फर्ममा बनाएर दिने गरेका हौँ।
८५ प्रतिशत माइल्ड केसलाई हेर्ने हो भने, आयुर्वेद पद्धतीबाट उपचार गर्दा ७ देखि १० दिनभित्रमा निको भएको पाएका छौँ। त्यसकारण पनि चाप भयो।
संक्रमितालई पनि मनोवैज्ञानिक तनाव पनि कम हुने गरेको छ। धेरै जसो प्रतिशत माइल्ड तथा लक्षण नभएको केस रहेको छ। त्यसैले धैर्यताको साथ उच्च मनोबल राख्नुपर्दछ।
कोरोना उपचारमा आयुर्वेद औषधी प्रभावकारी देखिएको हो?
भाइरल इन्फेक्सन पहिला पनि देखिएका थिए। तर, सबैलाई देखिदैँन। इम्यूनिटी पावर राम्रो छ भने रोगको माइल्ड लक्षण नै देखिँदैन। त्यति इम्यूनिटी पावर कसैको कम रहेको लक्षण देखा पर्दछ।
हामीले प्रिवेन्सन र इम्यूनिटी पावर बढाउनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। हामीले प्रयोग गरेको आयुर्वेद औषधी तीन–चार थ्योरीमा काम गर्छ। यही औषधीमा कोरोना लक्षण देखिन्छन्, त्यसलाई निको पार्ने क्षमता हुन्छ।
त्यसैले हामीले आयुर्वेद औषधीलाई समावेश गरेर संक्रमितलाई दिइरहेका छाैं।
उसो भए कोरोनाका संक्रमितलाई आयुर्वेद औषधीले निको पारेको भन्न सकिन्छ?
अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। अझै अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको छ। तर, हामीकहाँ अहिले सम्म हेर्दा बिरामी चाँडै रिकभर भइरहेका छन्।
संक्रमित आत्तिनुपर्दैन। धैर्यता लिनुपर्दछ। साहसका साथ एक–अर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्दछ। यस्ता कार्यबाट वा आयुर्वेद औषधी सेवन गर्नाले अवश्य पनि कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ।
संक्रमितको उपचार सँगसँगै आयुर्वेद अनुसनधान पनि भइरहेको छ कि?
अहिले अनुसन्धानभन्दा पनि सामाजिक दायित्वको रूपमा उपचारतर्फ केन्द्रित छौँ। त्यसकारण उपचारबाट नै अनुसन्धानतिर लागिरहेका छौँ। किन संक्रमित यति चाँडै निको भइरहेको छ? लक्षण भएका संक्रमित पनि निको भइरहेका छन् कि छैनन्? यस्तो विषयवस्तुको अनुसन्धान निरन्तर गर्दै आएका छौ।
हामीले ५ सयभन्दा बढी संक्रमितलाई उपचार गरेर पठाइसकेका छौं। माइल्ड लक्षण भएका केसहरू निको भएर गएका छन्। कोही पनि गम्भिर भएनन्। त्यसकारण केही न केही आयुर्वेद औषधीमा कोरोना विरुद्ध लड्ने क्षमता रहेको हामीलाई विश्वास भएको छ।
धेरै संक्रमितलाई निको पारेर पारेका छाैं। हामीलाई त्यसले पनि उत्साह थपिएको छ। यस्ता खालका औषधी सबै जनमानसले सेवन गर्नुपर्दछ। हामीले संक्रमितको निको भएको हेर्दा पनि आयुर्वेदले ठूलो भुमिका खेलेको छ भनेर, दाबीका साथ भन्नसक्छु। आयुर्वेद औषधी सबै रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाइरहेका हुन्छन्।
हाम्रै घर, आँगनमा पाउने जडिबुटी सेवन गर्नाले शरीरमा रोगप्रतिरोधक क्षमता वृद्धि हुन्छ।
तपाइँले आयुर्वेद औषधी सेवन गर्दा संक्रमित ७–१० दिनमा निको भएको दाबी गर्नुभयो, आयुर्वेदमा के छ त्यस्तो?
एक त कीर्तिपुरको वातावरण सफा छ। अर्को हामीले दिने गरेको काउन्सिलिङ पनि हो। कुनै पनि बिरामीको आधा रोग डाक्टरको डाढस र आधा औषधीबाट निको हुन्छ। त्यसकारण हामीले काउन्सिलिङको पाटोलाई बढी ध्यान दिएका छाैं।
बिहान गायत्रीमन्त्र बजाउने गर्छौँ भने बेलुका गीत बजाएर नाच्ने गाउने। यसबाट पनि बिरामीले सन्तुष्टि मिलेको अनुभव हामीले पाएका छौँ। आयुर्वेद औषधीको सेवनका साथ–साथ संक्रमितले व्यवस्थापनले पनि हो।
सम्रगमा भन्नुपर्दा आयुर्वेद औषधी, आहार, जीवनशैलीलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेमा कोरोनालाई जित्न सकिन्छ।
बिरामी संक्रमणमुक्त भएर जाँदाको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ?
संक्रमणमुक्त भएर जाँदा सबै नाचगान गरेर जान्छन्। एकअर्कोलाई हौसला बढाएर जान्छन्। उनीहरूलाई धैर्य र उच्च मनोबल बढाएर जाँदा रहेछन्। कोरोना संक्रमितालाई कहिले पनि तिरस्कार गर्न हुँदैन।
अहिले कोही पनि कोरोनाबाट जोखिममुक्त छैन। जो–कोहीलाई कोरोना लाग्नसक्छ। यस्तो अवस्थामा साहस र मनोबल बढाउनुपर्छ।
डा.राम आधार यादव
One thought on “आयुर्वेद औषधीले ८५ प्रतिशत कोरोना संक्रमित ७ दिनमै निको भएका छन्”
आर्युबेद दबाई नै किफायती स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ।